Ezekieri anopiwa basa rekuprofita (1-10)
“Kunyange vakateerera kana kuti vakaramba” (5)
Anoratidzwa gwaro rainge rakanyorwa nziyo dzekushungurudzika (9, 10)
2 Akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu,* simuka umire nditaure newe.”+ 2 Paakataura neni, mweya wakapinda mandiri ukaita kuti ndimire netsoka dzangu+ kuti ndinzwe iye aitaura neni. 3 Akabva ati kwandiri: “Mwanakomana wemunhu, ndiri kukutuma kuvaIsraeri,+ kumarudzi anopanduka ayo akandipandukira.+ Ivo nemadzitateguru avo vakabvira kare vachinditadzira uye nanhasi vachiri kunditadzira.+ 4 Ndiri kukutuma kuvanakomana vasingateereri uye vakaoma musoro+ uye unofanira kuti kwavari, ‘Izvi ndizvo zvataurwa naChangamire Ishe Jehovha.’ 5 Kunyange vakateerera kana kuti vakaramba nemhaka yekuti ivo imba inopanduka,+ chokwadi vachaziva kuti pakati pavo paiva nemuprofita.+ 6 “Asi iwe mwanakomana wemunhu, usavatya,+ uye usatya mashoko avo, kunyange zvazvo wakakombwa nemakwenzi anobaya uye neminzwa*+ uye uchigara pakati pemarize. Usatya mashoko avo,+ uye usavhundutswa nezviso zvavo,+ nekuti ivo imba inopanduka. 7 Unofanira kuvaudza mashoko angu, pasinei nekuti vanoteerera kana kuti vanoramba, nekuti ivo vapanduki.+ 8 “Asi iwe mwanakomana wemunhu, teerera zvandiri kukuudza. Usapanduka seimba iyi inopanduka. Shama muromo wako udye zvandiri kukupa.”+ 9 Pandakatarisa, ndakaona ruoko rwakatambanudzirwa kwandiri,+ uye rwainge rwakabata gwaro.*+ 10 Paakarivhura pamberi pangu, rakanga rakanyorwa mukati nekunze.+ Rainge rakanyorwa nziyo dzekushungurudzika* nemashoko anochemedza uye anoita kuti vanhu varidze mhere.+
^ Apa ndipo panotanga kuwanika mashoko ekuti “Mwanakomana wemunhu” muna Ezekieri ayo anowanika ka93 imomo.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kunyange zvazvo vanhu vacho vakaoma musoro uye vakaita sezvinhu zviri kukubaya.”